Marii Siyaasaa Oromoo kan ABO, KFO fi Bakka Buutota PP Waliin Geggeeffame – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMarii Siyaasaa Oromoo kan ABO, KFO fi Bakka Buutota PP Waliin Geggeeffame
Marii siyaasaa Oromoo Guraandhala bakka Dr. Abiyi Ahmed argametti gaggeeffame milkii malee xumurame.
Odeessi nu gahe akka ibsetti, walgahiin Guyyaa gaafa (16.02.2021) Wajiiraa Badhadhiinaa Oromiyaatti akka lakkobsaa sa’aa biyyaa Itoophiyaatti ganamaa sa’aa 3:00 eegalee hanga sa’aa 6:00tti gaggeeffame.
Walgahii kana irratti Muumichaa Ministeera Ityophiyaa (Dr. Abiyi Ahmed), Ittanaa Presidantii Oromiyaa (Obbo Shimalis Abdisaa), Obbo Fiqaduu Tasama, Obbo Moges .., Obbo Leencoo Lataa, Dr. Diimaa Nagawoo, Obbo Galaasa Diliboo, Prof. Maraa Gudinaa Presidantii KFO, HD ABO Jaal Daawud Ibsa Miseensoolii ABO kan dhaaba irra of baasan Araarsoo Biqilaa, Toleeraa Adabaa fi Ibsa Nagawoo qooda fudhataaniiru.
Dubbeen marii kanaa Obbo Shimalis Abdiisaa uttuu garaa dhihaatti hin imaaliin duraa Prof. Mararaa akka gafa 15.02.2021 argee mari’achuu fedhuu beeksiissee akka ture beekameera.
Haata’uutii, gaafa 15.02.2021 jechuun guyyaa kaleessaa yeroo haasa Prof Mararaa waliin godhaaniin Prof. Mararaan akka ABO fi KFO waliin hojjeetan wan beeksiisseef mariin kun utuu gamataan qinda’ee kan jedhu eere.
Akka kanaan karaa Obbo Moges waamichi sun gaafa 15.02.2021 HD ABOf dhaqqabe.
Eegalaa marii Guraandhala 16 kana irratti MM akka KFO fi ABOn Filmaata biyyooleessaa 6ffaa irratti qooda fudhataan jalaa sararee beeksise.
Itti dabaluunis rakkoo ABOn bitna’uu ilaalchissee Leencoo Lataa, Diimaa Nagawoo, Galaasa Dilboo fi Prof. Mararaan akka yaada furmaata (Proposal) qopheessan akeeke.
Dhimma kana irratti Leencoon “ABOn hedduu dha; garuu ‘ABOn nu duwwaa dha,’ kan jedhuu Daawud duwwaa wan taheef yoo kanaa Daawuud fudhatee hiikuun ni danda’ama,” jedhee dubbate.
Diimaa fi Galaasan ABOn rakkoo yeroo dheera kan qabu tahu yeroo dubbatan, Prof. Mararaan rakkoo amma keessa jiruuf Jaarsa lakkaawatanii nutillee keessatti qooda fudhachuun akka hiikamu utuu tahe kan jedhu dhiyyeesse.
Wal;gahii kana irratti Araarsoo, Toleeraa fi Ibsaan komii qaban dhiyyeeffatan.
Gama HD ABOn filmaataas tahe rakkoo jiruuf namootnii dhimmii ilaalu birooniis waan mana hidhaa jiraniif isaaniis bahun, waajjirootiin banamanii Korrii gaggeeffamee akka furmaatnii tahu kan jeedhuu yaada dhiyyeesse.
Gama Araarsoofaaniis jaarsummaan akka hinhojjetne himataan.
Kanaaf Jarri duraa arfan jechuun Leencoo, Diimaa, Galaasaa fi Mararaan akka yaada furmaataa dhiheessaniin akkumaa jalqabaatti jedheen MM gudunfee.
HD ABO Jaal Daawud Ibsaa walgahicha irratti adeemsi akeekame kun “rakkinicha hiika jedhee amanuu irratti reservation qaba,” jedhe.